प्रधानन्यायाधीश किन न्यायपरिषद छल्दै छन् ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
प्रधानन्यायाधीश किन न्यायपरिषद छल्दै छन् ?
अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित चार न्यायाधीशलाई उनले विशेषबाट हटाउने निर्णय गरेपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको छ
२०७८ श्रावण ६, बुधबार १२:४९:००
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले असार मसान्तका दिन एकाएक विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुलाई सरुवा गरिदिए । अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसहित चार न्यायाधीशलाई उनले विशेषबाट हटाउने निर्णय गरेपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।
कोभिड महामारी र निषेधाज्ञाका कारण लामो समय थाँती रहेका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिका मुद्दाका फाइल न्यायाधीशहरु खोल्न थालेपछि ती न्यायाधीशको सरुवा भएको छ । कार्कीकै कुरा गर्ने हो भने उनले निर्विवाद ढंगले काम गर्दै थिए । कुनै प्रचारको लोभ वा दबाबमा नपरी खुरुखुरु काम गर्ने स्वभाव भएका कार्कीले अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातजस्ता सम्पत्तिवाल र शक्तिशाली व्यक्तिलाई थुनामा पठाएका थिए ।
त्यस्तै बालुवाटार प्रकरणकै अर्का मुख्य अभियुक्तलाई पनि उनले थुनामै बसेर मुद्दाको प्रतिवाद गर्नुपर्ने आदेश गरेका थिए । जबकि, ती दुवै अभियुक्तलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पेसी तोकेका न्यायाधीशहरुले नाम मात्रको धरौटीमा छाडिदिएका थिए ।
कार्कीले पछिल्लोपल्ट बालुवाटार प्रकरणकै अर्का अभियुक्त विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेका थिए । कार्कीले त्यो आदेश गर्दा पनि सर्वोच्चकै यसअघिका आदेशलाई आधार मानेका छन् । तर, त्यसको भोलिपल्टै राणाले कार्कीलाई चार भञ्ज्याङ कटाएका छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने या त कार्कीबाट गच्छदार थुनियोस् र आफूबाट छाड्ने अवसर मिलोस् भन्ने राणा चाहन्थे, जसरी दीप बस्न्यातलाई छाडियो । होइन भने गच्छदार प्रकरणमा कार्कीलाई दण्डित गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
यदि गच्छदारलाई थुनामै राख्नुपर्ने बुझाइ राणाको थियो भने सरकारी पक्ष विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध
सर्वोच्चमा जाँदा त्यहीँबाट थुन्ने आदेश गरेर राणालाई झन् क्रान्तिकारी बन्ने अवसर थियो । विशेष अदालतका सामान्य त्रुटि वा कमजोरी सच्याउन मिल्ने ठाउँ छँदै थियो । ठूलै कुनै बदमासी वा बदनियत देखिँदो हो त राणासँग न्यायपरिषदमै काजमा झिकाएर छानबिन समिति बनाउने अधिकार छँदै थियो । यसअघि पनि मिडियामा छाउन देशभरका करिब दुई दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशलाई छानबिनका नाममा तानिएकै हो । त्यतिखेर राणाले मिडियाबाट वाहवाही खाएकै थिए । तीमध्ये कति जनालाई वास्तविकरुपमा कारवाही भयो भन्ने अर्को पक्ष छ ।
कार्कीलाई हटाउनुपर्ने कारण खोतल्दै जाँदा विशेष अदालतका केही दिनका पेसी सूची केलाउनुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारीप्रति कठोर मानिने न्यायाधीश कार्कीले बालुवाटारको जग्गा प्रकरण मात्र होइन, ठेकेदार विक्रम पाण्डेलगायतका ठूल्ठूला मुद्दाका फाइल खोल्न थालेका थिए । हेर्दाहेर्दैमा राखेर उनले लगातार सुनुवाइ गरिरहेका थिए । त्यही मुद्दाको फैसलाको नजिक पुगेपछि कार्की सरुवामा परेका छन् । कार्कीबाट पाण्डेमाथि कुनै अप्रिय निर्णय हुन सक्ने ठानेर शक्तिकेन्द्रले चलखेल गरेको पनि हुन सक्ने माथिका सिलसिलेवार घटनाबाट बुझिन्छ ।
कार्कीको सरुवा कुनै पनि अर्थमा स्वाभाविक र औचित्यपूर्ण देखिँदैन । असार–साउनको महिना न्यायाधीश सरुवाको मौसम हो । तर, न्यायाधीश सरुवा गर्ने निकाय प्रधानन्यायाधीश वा उनको सचिवालय होइन । यो जिम्मेवारी र अधिकार न्यायपरिषदको हो । न्यायपरिषद भनेको केवल प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन । प्रधानन्यायाधीश त परिषदका पाँच सदस्यमध्ये एकजना हुन् । बाँकी चारजनाको पनि बराबर हैसियत, विवेक, स्वाभिमान र अस्तित्व हुन्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर, न्यायपरिषदलाई पनि छलेर एकाएक रातारात यो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो प्रश्न न्यायपरिषदका वरिष्ठ विद्वान सदस्यहरुले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्कीलाई यस्तो समयमा सरुवा गरेका छन्, जतिखेर सरकार समेत संक्रमणको अवस्थामा छ । विशेष अदालतका न्यायाधीश हेरफेरको निर्णय न्यायपरिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले गर्ने हो । तर, पुरानो सरकार ढलेको, नयाँ सरकारले पूर्णता नपाएको, कानुन मन्त्रीले आफ्नो कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्रको अध्ययन पनि गर्न नभ्याएको मौका पारी भोलि अर्को दिन नै आउँदैन कि भनेझैँ गरी राणाले रातारात न्यायाधीशहरुलाई डाँडा कटाउने निर्णय गरेका छन् । दिनभर कामको थकानले लखतरान परेका न्यायाधीशहरुलाई स्याबासी दिनुको साटो एक शब्द सोध्दा पनि नसोधी, बिनाकुनै ठोस र पारदर्शी कारण, न्यायपरिषद र मन्त्रिपरिषदको कार्यक्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरी काम गरिरहेको ठाउँबाट उठीवास लगाउने निर्णय न्यायिक नेतृत्वबाट हुनुले कुन हदसम्मको चलखेल भएको छ भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
यदि अब न्यायाधीशको सरुवा र पदस्थापन यही तरिकाले हुने भने न्याय क्षेत्र थप बेथिति र अराजकताको गर्तमा पुग्नेछ । न्यायिक नेतृत्वबाटै यस्ता अपारदर्शी, अन्यायपूर्ण र स्वेच्छाचारी निर्णय हुन्छन् भने राज्यको कुन निकायबाट विवेकी निर्णयको अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? के यसतर्फ प्रधानन्यायाधीश राणाले विचार गरेका छन् ? यो कुनै एकजना प्रेमराज कार्कीको सन्दर्भको मात्र कुरा होइन । हरेक न्यायाधीशले अहिले यो प्रश्न गरिरहेका छन् ।